Goodax Barre;”Waa inaan la siyaasadeyn waxbarashada ardayda Puntland.” - Jowhar Somali news Leader
Home News Goodax Barre;”Waa inaan la siyaasadeyn waxbarashada ardayda Puntland.”
Goodax Barre;”Waa inaan la siyaasadeyn waxbarashada ardayda Puntland.”
Wasiirka Waxbarashada dowlada federalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa markale ka hadlay khilaafka ka jira shahaadada dugsiga sare iyo ardayda wax ka barata Dugsiyada Puntland, isagoo markale ku celiyay Imtixaanka ay qaaddo Wasaaradda Waxbarshada ardaygii aan gelin inuusan heli doonin shahaado.
Isagoo u waramayay taleefishinka qaranka ayuu siihayaha wasiirka waxbarashada Goodax Barre ayaa sheegay in ardayda deegaanada Puntland looga baahan yahay in ay galaan Imtixaanka Wasaaradda Waxbaarshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay qaaddo, haddii taasi ay dhici weydana waxaa uu sheegay in aysan heli doonin wax shahaado ah.
Siyaasyiinta Puntland ayuu ugu baaqay Wasiirka waxbarashada xukuumada federalka in aysan siyaasadeyn Mustaqbalka ardayda Puntland wax-kabarata, isagoo sheegay in siyaasiyiintu aysan hayn meel ay shahaado ka siiyaan ardayda kasoo baxda dugsiyada Puntland, waxaana uu uga digay dhammaan siyaasiyiinta in aysan Mustaqbalka ka lumin Ardayda.
Sii hayaha Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa hore dhowr jeer u sheegay in aan shahaado la siin doonin arday aan galin Imtixaanka Mideysan ee Wasaaraddu qaaddo.